Fiarovana ny Somacou: nampitomboana 41 % ny haba amin’ny bodofotsy vita sinoa | NewsMada
Fiarovana ny Somacou: nampitomboana 41 % ny haba amin’ny bodofotsy vita sinoa
Velon-taraina ny orinasa mpanao lamba Somacou any Ambohimanga Ilafy noho ny fitobaky ny bodofotsy vita sinoa tonga eto Madagasikara. 90 % mahery ny bodofotsy vita sinoa hafarana miditra eto an-toerana sady mora ka manimba ny orinasa tsy mampisy ny fifaninanana ara-dalàna, raha ny fanazavana nomen’ny ao amin’ny Somacou.
Ny vidin’izany bodofotsy vita sinoa izany, mitovy amin’ny vidin’ny akora ilain’ny Somacou amin’ny fanaovana lamba firakotra toy izany. Nanamarika anefa ny ao amin’ny Somacou fa maharaka tsara ny tinady eto an-toerana ry zareo. Raha nahavita namokatra iray tapitrisa isan-taona io orinasa malagasy io tany aloha, tsy misy afa-tsy 150 000 izany amin’izao fotoana izao noho izay fitobaky ny vokatra avy any ivelany izany. Noho izay fahavoazan’ny orinasa malagasy izay, notataovana 41 % ny bodofotsy vita sinoa manomboka izao. Isaoran’ny mpitantana sy ny mpiasa ny fanjakana amin’ny fiarovana azy ireo.
Ohatra iray manapotika ny indostria malagasy ny voalaza fa eo ny ANMCC* mandray fepetra miady amin’ny fitobaky ny fanafarana entana avy any ivelany. Tsy maharaka izany fifaninanana izany ny orinasa malagasy ka tsy vitsy ny voatery nanala mpiasa na nikatona tanteraka mihitsy. Manomboka izao, ampitomboana 30 % ny haba amin’ny vokatra sasany avy any ivelany ; ho an’ny « pâtes alimentaires » manokana, 35 % ny haba alaina aminy. Raha ny voalazan’ny ANMCC, 40 000 t isan-taona ny « pâtes alimentaires » ampidirina eto amintsika amin’izao fotoana izao, raha mbola 15 000 t izany tamin’ny taona 2015.
Olana ny fahefa-mividy
Tsy tambo isaina ny fampidirana entana miteraka fifaninanana tsy ara-dalàna, manimba ny fihariana eto an-toerana amin’ny ankapobeny. Tokony homena ny toerany ny orinasa malagasy amin’izao fandraisana fepetra izao sy hampitombo ny harinkarena faobe. Nefa tsy azo odian-tsy fantatra ny fahefa-mividin’ny mpanjifa maro anisa, tsy mahatakatra afa-tsy ny « friperie » avy any ivelany, ohatra. Miankina amin’ny fanatsarana ny fari-piainan’ny maro anisa ny vahaolana.